Zviri kukosha Reset password mushure mechinguva kudzivirira nhoroondo yako kubva hackers. saka, pano ini ndakasika ino kupa ruzivo pamusoro Reset Yahoo Mail Password. Izvi zvinonyanya nyore muitiro kungotevera ino.
Ndakavazivisa nyaya iyi uchishandisa danho nyore chaizvo nedanho nzira, uye akashandisa mutauro nyore chaizvo kuti nyore kunzwisisa maererano vose. Kana uri kutsvaka How Rokuchinja Yahoo Mail Password ipapo nyaya ino ichakubatsira nyore ucharipedza.
Enda kuburikidza kumusoro pasi ino uye kutevedzera danho nedanho nzira Change Yahoo Mail Password. Unofanira kutanga login yako Yahoo Mail nhoroondo uchishandisa Username wako uye Password. Zvino pashure kutevera matanho Change Yahoo Password.
Reset Yahoo Mail Password | Danho nedanho Complete Guide
Ongorora pazasi panotaurwa muitiro kuti Yahoo Mail Password Change. Anovatevera sezvataurwa uye kupedzisa muitiro zvinobudirira.
Pinda kuna pamutemo Yahoo Mail Website kubudikidza watinya pano: login.yahoo.com
ikozvino, Kupinda email address uye muchisviniro “Next”.
Mushure maizvozvo, pinda password uye muchisviniro “Nyorera mu”.
ikozvino, enda zvako Profile Photo pamwe zita renyu kurudyi yokumusoro pakona tinya “Account Info”.
Sezvo imi tinya Account Info uchava Redirect kuti Tab itsva. Pano tinya Account Security uchaona ane pfungwa “Change Password” kurutivi rworudyi pamusoro peji.
ikozvino, tinya kuti uye kupinda New pasiwedhi kaviri kuti asimbise achizviendesa “Ramba” bhatani.
Your Yahoo Mail Password iri vakabudirira achinja ikozvino.
Nyaya ino rinopa mashoko azere pamusoro How Rokuchinja Yahoo Mail Password. Unofanira kungoita danho nedanho nzira nokuda Yahoo Mail Password Change. Handina kuisawo mifananidzo pamwe matanho nyore kunzwisisa uye kupedzisa chirongwa.
Zvinoita here kuti munhu kana uchibvumirana inofambiswa yako pamusoro ino kunyange kana muine mubvunzo wo mugovane kushandisa pazasi kutaurwa Comment bhokisi. Uye kuwana nguva chinobatsira update seizvi pa-website yedu www-hotmail-com.email.